ikhaya » Okufumaneka » Indlela yokwakha uMbutho oLuntu oLuntu oLuntu oLuntu oluLungileyo lweTV
Indlela yokwakha uMbutho oLuntu oLuntu oLuntu oLuntu oluLungileyo lweTV
2017 NAB Bonisa Ukungeniswa koHlelo
NguGavin McGarry noDanielle D'Ornellas
Ukuba awuqhelekanga, i-Midsomer Murders yenye ye-United Kingdom ephezulu yee-detective series, kunye ne-exportation enkulu ye-drama ephuma e-UK. Ngamaxesha angaphezulu kwamaxesha e-19, uchungechunge lokumangalisa ukubulala oluqhubekayo ludinga ukukhawulela amanqaku amaninzi kunye nolona lungcono ekusebenzeni italente. I-Blackmail, i-intrigue, inkohliso, ukukrexeza kunye nokubulala, njengokuba ukuhamba kwesantya-kwinqanaba elibonakala ngathi lingabonakaliyo le-Midsomer lichazwe yi-DCI Barnaby kunye neenkcukacha zakhe ezixhasayo.
Xa iJumpwire iqalile ukusebenza kunye nabakwa-Midsomer Murders, eveliswe yi-Bentley Productions, inxalenye yeqela lonke le -XXXMia kunye ne-curly internationally kwi-All3media International, kukho imingeni emininzi esimele sinqobe. Umboniso uyathandwa kakhulu kwihlabathi lonke, kodwa unamagama ahlukeneyo, iilawulithi zecala, kunye neeshedyuli zokuphonononga kwimimandla eyahlukeneyo. Nangona ixesha lwakutsha nje lugqiba ukugijima kwawo e-UK ekuqaleni kwe3, abanye abaphulaphuli abasaboni ngaphambili. Kukho neminyaka eyi-2017 yembali, iminyaka eyi-19 yabalinganiswa, kunye noluntu lwabalandeli abanomdla oza kukwazi xa wenze iphutha. Oko kwathiwa, sazi ukuba sinokunyusa ama-Midsomer Abahlaseli bezentlalo nabaphulaphuli kunye kunye neenkcukacha kwicala lethu, sincedisa ukuncintisana nezinye zeempawu ezintsha kwiibhloko.
Ngoko, uthatha njani i-1919-year-oldhow kunye nokuvuselela uluntu loluntu? I-Jumpwire Media yaqala ukusebenza kunye nabakwa-Midsomer Abahlaseli bokugqibela ukuwa ukunceda ukusekwa kwecandelo le-19th impumelelo kwimidiya yoluntu. Nantsi into esiyifunayo kumava.
Musa ukwenza iingcinga malunga noluntu lwakho
Enye yezinto zokuqala esizenzayo yayijongene nabaphulaphuli bezokuhlalisana nabasebenzi be-Midsomer Murders abalandeli ukuba babone indlela abaxhathisa ngayo idatha yabemi malunga nababukeli bendabuko kunye neziphumo azikho izinto ozilindela kulo mdlalo omude. Sasicinga ukuba uluntu luya kubakho abalandeli phakathi kwe-50s, kunye nezokwahlukana kwesini kunye neyona nto e-UK, kodwa sasinokuba (sixolele i-pun). Abalandeli be-Midsomer Abahlaseli kwizentlalo babenokuba ngabafazi be-45-55, kwaye ngelixa abaninzi abalandeli zaye E-UK, iU.SA yafika kwisibini, esondelene kakhulu, kwaye yayixhamla phambili! Oku kwakuyiindaba kumthengi wethu kwaye wasinceda senze umxholo ngokubhekiselele kula bantu beengqondo. Siphinde safumanisa ukuba inani labalandeli kwiminyaka yabo engamashumi amabini aneshumi nantathu bekhuphuka, kwaye, ngokuthumela okuthe ngqo, bekhulisa ukubandakanyeka kwabo. Oku akufanele kube yinto emangalisa, njengoko kubonisa ixesha elide njengama-Midsomer Murders adluliselwa phantsi kwaye abelwana ngazo kwizizukulwana zentsapho kunye nabahlobo.
Zama izinto ezintsha
Nantsi into ongenakuyilindela ukusuka kwiphepha apho umntu oqhelekileyo ngu-45-54. Izithuba zethu eziphezulu ziyakhumbula. Baye bacinga ukuba siyindoda; we Sicinga ukuba siyindoda. "Abaphulaphuli bethu abaphezulu baxhomekeke kubafazi be-55-64, ezi zinto aziyi kusebenza." Kodwa zenza, kuba i-meme eyenziwe kakuhle idibana nabaphulaphuli. Ngokwazi umboniso, nokuqonda ihlaya, i-meme iqondakala kubantu bonke ubudala.
Enye into esiyifundile kwangaphambili kukuba abathengi bethu bakhathazeke ngokuthumela i-TOO eninzi, nto leyo ixhaphakileyo yinto nawuphi na umthengi. Abakhuphisana nabo babethumela kanye kuphela ngosuku, okanye ngaphantsi, kwaye bafuna ukwenza okufanayo. Kodwa ukuba kukho enye into yokuba uluntu lukuxelela, kukuba abalandeli bahlala befuna ngaphezulu. Ngeeminyaka ze-19 zembali yokucoca, iqela lethu liza kuvelisa umxholo kunye nokuveliswa kwemveliso kwaye ufumane amabali kunye nabadlali abangezange bacinge ngako kwiminyaka, kwaye bayidla. Ngaphambi kokuba basebenze nabakwa-Midsomer Murders, babethumela malunga namaxesha amane ngeveki, ngokukodwa baxhomekeke kwiziganeko ezintsha zexesha elizayo. Kodwa emva kokukhangela idatha kunye nomxholo, saqala ukuthumela kathathu ngosuku kwaye sibone ukubandakanyeka okukhulu kwandisa iveki ngeveki. Isicwangciso sethu sibone ukunyuka ngaphezu kwe-150%, ukufikelela kwi-200%, kunye nokudibanisa kunye nokunyuka kwe-200% ngenyanga yethu yokuqala. Kwaye inxalenye ebhetele kukuba abalandeli babengabandakanyekanga kuphela kumxholo ophathelene nexesha elitsha, babona iibhokhwe kunye nezikhumbuzo zeenkwenkwezi zabo ezizithandayo kunye neepisodes.
Cinga kwiLizwe lonke
Enye yeengxaki ezinkulu kwiqela lethu kukuba i-Midsomer Murders yinto yehlabathi, kwaye kufuneka siqaphele oko. Ngokomzekelo, xa sithunyelwa malunga nomxholo omtsha e-UK, kufuneka sihlale sikhumbula ukuba kukho ezinye iindawo ezisemva kwinqaku. Nangona kunjalo, ngokuthumela imifanekiso kunye nasemva kokuqulathwe kwimixholo, sikwazi ukugcina abaphulaphuli bebandakanyekile kwaye banomdla wokuqaliswa kwee-series kummandla wabo. Siphinde sakwazi ukusebenzisana nama-popular fansites kunye nabasasazweni kwimimandla eyahlukeneyo ukugqamisa uluntu lwaseMidsomer Abahlaseli bomhlaba.
Mamela Ummandla Wakho
Nangona singenakukwazi ukulawula oko kwenzeka ngokwenene kwisikrini-, siyakwazi ukuphendula oko abaphulaphuli bethu basitshela khona kwiimidiya zentlalo kwaye bayayifumana. Kwi-Midsomer Abahlaseli, i-series-running series ephantse ye-20 iminyaka, kukho iibalo ezininzi kwaye wonke umntu unentandokazi yakhe. Enye indlela yokulungelelanisa oku kwahlukana ngokusetyenziswa kweenxephelo-to-action okanye ngokusebenzisa i-Facebook Live Polls ukudala ingxoxo kunye namacebiso - ukutya kwiintandokazi zentandokazi ngelixa zibandakanya nabalinganiswa bebonke abathandekayo kwingxoxo. Ngaloo ndlela, izithuba ezilula zicela abantu ukuba bathethe nge-sidekick yabo eyintandokazi bangaba enye yezithuba ezinkulu kwiveki.
Khuthaza umxholo owenziwe ngumsebenzisi
Enye yezinto ezilungileyo ngokusebenza kunye nodumo lwegama lobuninzi ngeminyaka emininzi yembali kukuba ukuba unokucinga ngoluhlobo oluthile lwe-fan-in, ungaqinisekisa ukuba umntu wenze. Ukusuka kwizindlu ezincinci ukudweba, i-sweaters kunye namabali, abalandeli be-Midsomer Murders baye badala imisebenzi eminingi yobugcisa ephefumlelwe ngumboniso. Ukubonisa nje kunye nokugqamisa le mizamo yindlela ephakamileyo yokukhuthaza ukuhanjiswa komxholo okwenziwa ngumsebenzisi kwiphepha lakho.
Ngokubanzi, into ebalulekileyo ekukhunjuleni xa usebenza kunye nomboniso onomdla onjenge-Midsomer Murders kukuba ukugxila kwangempela ngaba abalandeli. Umboniso awuyi kubakho apho ngaphandle kwabo, ngoko qiniseka ukuba uhlala ujonge kubo xa udala isicwangciso soqhelo kwaye awuyi kuhamba!
UGavin McGarry Bio Capsule:
UGavin McGarry usebenze kwi-media space iminyaka engaphezulu kwe-25. Kwi-2009, wasungula i-Jumpwire Media, i-agrari ekhethekileyo ukwakha nokulawula uluntu lwentlalo yoluntu. Ngaphambi koko, uMcGarry wasebenza nge-Skype i-video ye-intanethi eyayixhaswa kwi-intanethi iqalisa i-Joost, kwaye yayiyiNtloko ye-platform yophuhliso lweshishini kwinkampani yokuvelisa i-TV ye-Endemol. Amava akhe adlulileyo aquka izikhundla kwiinkonzo ezinkulu zethelevishini, kunye nokuhlala kunye nokusebenza kwenkampani yokuvelisa umabonwakude kunye ne-agent advertising agency.
2016 NAB Bonisa I-2016 NAB Bonisa i-Job Fair 2016 NAB Bonisa iindaba Izabelo zokuBasa Umagazini we-Beat Broadcast KwiNkomfa yabasasazo KwiNkomfa yoSasazo NAB 2015 NAB 2016 NAB Bonisa NAB Bonisa i-2016 Nab ubonisa imisebenzi NAB Bonisa i Las Vegas NAB Bonisa Ukubhaliswa NAB16 Nabshow Umbutho kaZwelonke woLwazi lwabasasazo Ihlabathi loPhuhliso lweZithuba Sprockit ITeknoloji yeTV	2017-05-07
Previous: Umhlaziyi-Contemporary Painter ufuna i-Studio Intern
next: Injineli yoLwakhiwo lweZoshishino
Dejero kunye ne-Draganfly i-Ideal Match!
I-Metaliquid yenza i-AI I-Analysis yeVideo
Umhlangano weSizwe we-54th SBE Okthoba 2-3 eDanvers, MA
I-Spotlight: I-Blackmagic Pocket Cinema Ikhamera 4K
UJeff Smith Ukhethiweyo njengoMongameli weMerika, iMelika yiLawo
#BROADCASTASIA: Thatha ikusasa!
URachel Matchett kwi-Technicolor Impact Visual Effects!
I-Sim ye-Media Shuttle portal ithuthukisa ukuhamba komsebenzi kunye neenkonzo zabaxhasi ngexesha lokuveliswa kweSyfy's Krypton
I-Adorama INSPIRE Series igxininisa kwi-Workshops ngoJuni 25 kunye ne-27!
Archives Khetha inyanga Julayi 2018 (511) Juni 2018 (869) Meyi 2018 (871) Epreli 2018 (831) Matshi 2018 (780) NgoFebruwari 2018 (685) NgoJanuwari 2018 (605) Disemba 2017 (396) Novemba 2017 (712) Oktobha 2017 (835) NgoSeptemba 2017 (608) Agasti 2017 (583) Julayi 2017 (710) Juni 2017 (543) Meyi 2017 (621) Epreli 2017 (695) Matshi 2017 (704) NgoFebruwari 2017 (340) NgoJanuwari 2017 (364) Disemba 2016 (608) Novemba 2016 (344) Oktobha 2016 (556) NgoSeptemba 2016 (622) Agasti 2016 (1056) Julayi 2016 (532) Juni 2016 (414) Meyi 2016 (505) Epreli 2016 (713) Matshi 2016 (743) NgoFebruwari 2016 (382) NgoJanuwari 2016 (122) Disemba 2015 (358) Novemba 2015 (327) Oktobha 2015 (152) NgoSeptemba 2015 (259) Agasti 2015 (440) Julayi 2015 (276) Juni 2015 (140) Meyi 2015 (128) Epreli 2015 (435) Matshi 2015 (289) NgoFebruwari 2015 (298) NgoJanuwari 2015 (131) Disemba 2014 (103) Novemba 2014 (194) Oktobha 2014 (149) NgoSeptemba 2014 (381) Agasti 2014 (250) Julayi 2014 (287) Juni 2014 (363) Meyi 2014 (231) Epreli 2014 (744) Matshi 2014 (560) NgoFebruwari 2014 (427) NgoJanuwari 2014 (289) Disemba 2013 (137) Novemba 2013 (545) Oktobha 2013 (290) Julayi 2013 (26) Meyi 2013 (13) Epreli 2013 (1) Matshi 2013 (2) 0 (306)
Hey Buddy !, Ndiyifumene le ngcaciso: "Indlela yokwakha uMbutho oLuntu oLuntu oLuntu oMmandla weLifa leTV". Nantsi ikhonkco yewebhusayithi: http://www.broadcastbeat.com/how-to-build-a-strong-social-media-community-for-a-acy-tv-brand/. Enkosi.